Ahoana ny fiarahan'ny Airbnb sy Thailand Bank Savings Bank miasa?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ahoana ny fiarahan'ny Airbnb sy Thailand Bank Savings Bank miasa?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Airbnb, orinasam-pitsaboana entin'ny vondrom-piarahamonina, ary ny Bankin'ny Tahirin'ny Governemanta, banky an'ny fanjakana 105 taona any Thailandy, dia nanambara fiaraha-miasa stratejika ofisialy hanampiana amin'ny fampiroboroboana sy fanomezana hery ireo mpandraharaha fandraisam-bahiny Thai - manomboka amin'ireo tompona trano fandraisam-bahiny eo an-toerana.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miombon'antoka, ny GSB dia hanampy amin'ny famatsiam-bola tsaratsara kokoa ho an'ireo mpandraharaha mandray vahiny amin'ny alàlan'ny fanomezana indram-bola misy zana-bola malefaka sy drafitra fizarana vola. Airbnb dia hiara-hiasa amin'ny GSB hanampy amin'ny fananganana fahaiza-manao amin'ny alàlan'ny fampiantranoana sy fampiantranoana fampiantranoana mandritra ny fampifandraisana ireo tompona trano fandraisam-bahiny amin'ny sehatr'asa manerantany sy tambajotram-barotra misy vahiny 500 tapitrisa mahery.
Dr. Chatchai Payuhanaveechai, filoham-pirenena sy CEO GSB, ary Mike Orgill, mpitantana jeneralin'ny Airbnb ho an'i Azia atsimo atsinanana, Hong Kong, ary Taiwan, dia niara-nametraka ny fiaraha-miasa.
Tafiditra ao anatin'ny mpanamory fiaramanidina omaly, Airbnb sy GSB dia nanofana ireo tompon'andraikitra GSB sy ireo vondrona homestay 29 eo an-toerana, ao anatin'izany ireo mpandray anjara tamin'ny "Fifaninanana Homestay 2018 an'ny GSB", izay nanaiky ireo tokantranomaso miavaka any amin'ny faritany samihafa manerana an'i Thailand.
Ny fiaraha-miasa dia hanohana ny fizahan-tany maharitra eo an-toerana sady hanasokajy ny fizarana fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina manerana an'i Thailand, mifanaraka amin'ny tetikasan'ny Governemanta Thai hitarika ny fitomboan'ny harinkarena eo an-toerana amin'ireo tanàna faharoa amin'ny alàlan'ny fizahantany. Manokana, ny GSB sy ny Airbnb dia samy nivoady hanitatra ny fahafaha-manao asa ho an'ireo mpandraharaha micro mandray vahiny mba hanampy amin'ny fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
GSB dia hanome fonosana indram-bola manokana - hanomezana mpanjifa eny ifotony manana indram-bola kely sy malefaka kokoa - ho an'ireo mpandraharaha micro mandray vahiny izay mahafeno ny fepetra takin'ny Banky. Airbnb dia hanao andian-dahatsoratra fananganana modely ho an'ny train-the-trainer mba hampitaovana ireo tompon'andraikitra GSB amin'ny fahaiza-mivezivezy sy hampiasa ny sehatra manerantany Airbnb amin'ny fomba mahomby ary hampiala izany fahalalana izany ho an'ny tompona trano any ambanin'ny programa GSB.
Omaly, ny mpandray anjara dia nandray anjara tamin'ny andiam-pizarana fizarana momba ny fizahan-tany Thai sy ny fotoana mety ananany, ary koa ny atrikasa fampiantranoana sy fampiatoana Airbnb ho an'ny tompona trano fandraisam-bahiny. Ny Internet optic haingam-pandeha haingam-pandeha ho an'ny atrikasa dia natolotry ny orinasam-pifandraisan-davitra TOT Public Company Limited.
Airbnb Superhost, Nitaya Laisuwan, izay mampiantrano amin'ny tokantrano iray ao Bangkok, dia nizara ny tantarany manokana sy ireo fomba fanao tsara indrindra nananany koa. Ilay tompon-trano be fitiavana sy reny manan-janaka roa dia mpampianatra anglisy maharitra iray izay mandray tsara ny vahiny ao amin'ny trano hazo nentin-drazana Thai faha-4, miorina amoron'ny reniranon'i Chao Praya any Bangkok.
Dr. Chatchai Payuhanaveechai, filoha sy CEO, GSB:
“Ireo tokantrano ao an-toerana dia mifamatotra hatrany amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny fizahantany sy ny fiarahamonina. Manampy amin'ny famoronana lanja ara-toekarena sy sosialy izany, satria mizara ny fahendreny, kolontsaina ary fomban-drazana misy azy ireo amin'ireo mpitsidika manerantany. Ny fiaraha-miombon'antoka amintsika anio dia hanohana ny fizahan-tany maharitra sy mamorona amin'ny alàlan'ny tontolo iainana vaovao izay manamora ny fahazoana miditra amin'ny famatsiam-bola sy ny fampiofanana amin'ny fandraisam-bahiny, ahafahan'izy ireo mivoatra maharitra. Manantena izahay fa hizara ny fahalalany amin'ireo tompona trano fandraisam-bahiny any an-tanàna hafa ny tsirairay mba hanampy amin'ny fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Miaraka amin'ny sehatra manerantany Airbnb, izahay dia matoky fa ny tompon-tranonay dia hanana fitaovana hanomezana traikefa fandraisam-bahiny tsara indrindra eran'izao tontolo izao. ”
Mike Orgill, tale jeneralin'ny Azia atsimo atsinanana, Hong Kong, ary Taiwan, Airbnb:
“Fitaovana matanjaka ary hery manosika ny indostrian'ny fizahan-tany any Thailandy ny fizahantany eny amin'ny fiarahamonina. Ireo mpitsangatsangana erak'izao tontolo izao dia mitady traikefa an-dalambe ivelan'ny lalana rehefa mitsidika an'i Thailandy izy ireo, ary miroborobo ny fandraharahana mandray vahiny satria mitombo hatrany ny fangatahana fizahan-tany eo an-toerana, tena izy ary tsy manam-paharoa. Mitombo haingana ireo tokantrano ao amin'ny sehatr'asa Airbnb ankehitriny. Ny vondrom-bahoakan'ny mpampiantrano sy ny vahininay dia manitatra haingana mihoatra ny toerana lehibe fizahan-tany ka hatrany amin'ny tanàna ho avy toa an'i Nakhon Sawan sy Chiang Rai. Tao amin'ny GSB, nahita mpiara-miasa tena izy izahay izay mizara ny vinanay hampifandray nomerika ireo mpandraharaha mandray vahiny ao an-toerana ary hampiely ny tombotsoan'ny fizahan-tany mahomby sy maharitra manerana an'i Thailand. ”
“Nitady loharanom-bola fanampiny aho ary nanana traikefa nanofana trano maharitra ny vadiko ka nanapa-kevitra ny hanao trano hazo vita amin'ny fomba nentim-paharazana izahay. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra izahay fa hanofa olona Thai, nefa tsapanay fa hahaliana ny mpitsidika iraisam-pirenena izany satria tsy misy toa azy any amin'ny faritra misy anay Bangkok. Nijery sehatr'asa maromaro aho mba hanao lisitra ny trano fandraisam-bahiko ary nanapa-kevitra aho fa tena mifanaraka amin'ny filako ny Airbnb. Mora ampiasaina ny sehatra ary mora ho an'ny Host vaovao hametraka, azo antoka sy azo antoka ary mifehy ahy tanteraka rehefa mandray famandrihana. Amin'ny alàlan'ny Airbnb dia manana loharanom-bola fanampiny ho ahy sy ny fianakaviako aho, ary izany dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny fiainanay. ”
Wichit Methaanankul, Tompon'ny trano fandraisam-bahiny Monhmong any Chiang Mai ary iray amin'ireo tokantrano 10 farany nahazo ny fifaninanana GSB Smart Homestay 2018:
“Ity fiaraha-miasa ity dia fandraisana andraikitra lehibe satria mamela ny tompona trano fandraisam-bahiny hifandray sy hianatra mivantana avy amin'ilay sehatra toa ny Airbnb. Thai ny ankamaroan'ny vahininay ankehitriny, ary mikasa ny hampiasa Airbnb ho fantsom-barotra vaovao izahay, ary mino izahay fa afaka manampy anay hahatratra ireo mpitsangatsangana avy any amin'ny firenen-kafa. ”